Tag: ika nnọchite | Martech Zone
Ndị nnọchi anya ika
Mgbe ị na-agba asọmpi ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ, ụdị ntinye nwere ike ime ka ndị nwere ike ịbanye pụọ. Asọmpi hashtag na-ewepụ ihe mgbochi ndị ahụ ịbanye. Ndị na-eso gị kwesịrị iji naanị hashtag gị, a ga-anakọta ntinye ha na ngosipụta na-adọta anya. Shortstack hashtag n'asọmpi na-enye gị ohere ịnakọta ihe ntinye hashtag site na Instagram na Twitter mgbe ị na-eme ka njikọ gị na ndị fan kwalite. Na-anakọta ọdịnaya na nke ndị ọrụ nchịkọta ndị nnọchianya A hashtag zoo bụ ụzọ kachasị mfe iji kpokọta ọdịnaya ndị ọrụ